Somaliland Oo ku Dhawaaqday in Abaar Baahsan ka Jirto Degaanadeeda AwdalMedia Awdalmedia Somaliland Oo ku Dhawaaqday in Abaar Baahsan ka Jirto Degaanadeeda
Guddida gurmadka abaaraha ee Somaliland, ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inay jirto xaalad abaareed oo baahsani, taas oo saamaysay dad tiradoodu gaarayso 810,000 (Siddeed boqol iyo toban kun) oo qof.
Guddidan oo uu dhawaan golaha wasiirrada ka dhex magacaabay madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, islamarkaana uu guddoomiye u yahay madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo maanta shir jaraa’id qabtay, ayaa shaaciyey inay jirto xaalad abaareed oo saamaysay gobollada iyo degmooyinka Somaliland, waxana ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan baaxadda abaarta iyo tallaabooyinka guddi ahaan u qorshaysan iyo baaqyada ay dirayaan, waxana uu warsaxaafadeedkaasi u dhignaa sidan:
Ka dib markii roobabkii Gu’gu uu teel teel ku ahaa qayb ka mida dalka, roobabkii Deyrtana aan la helin waxa marag ma doon ah in ay jirto xaalad abaareed.
Haddaba, Iyada oo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ah ee NADFOR ee la xiriira xaaladda abaarta ayaa waxaa fadhigii 83aad ee Golaha Wasiirrada Somaliland uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi magacaabay Guddida Gurmadka Abaarta oo ka-hawl gashay qiimaynta xaaladda iyo dejinta qorshaha lagaga jawabayo.
Guddida abaaraha ayaa waxay ay bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyaga oo qaaday tallaabooyin kala duwan kuwaasi oo kala ah:
• Howl-galinta guddida farsamo oo ka kooban wasaaraddaha xubnaha ka ah guddida abaarta iyo hay’adda NADFOR oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee jirta guud ahaan, kana soo diyaariyay war-bixin dhammaystiran oo la xirirta xaaladda abaarta.
• Waxa biyo-dhaamis ay ka bilaabeen booyadaha gobolada Togdheer, Sanaag, Sool iyo Maroodijeex
Aniga oo tix-raacaya warbixinta xaaladda abaarta, waxa aan ku dhawaaqayaa in ay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dhammaan gobalada Somaliland sida: Sool, Sanaag, Togdheer, Sahil, howka Marodijex, iyo xeebta Gobolka Awdal.
Qiimeynta lagu sameeyay waxyeeladda abaartu waxay si toos ah u saamaysay dad gaaraya 810,000 oo qof oo u baahan kaalmo deg-deg ah sida biyo, cunno iyo caafimaadba, Waxana sidoo kale la filanayaa in ay saamayn doonto dad ku dhow 1,200,450 qof, afarta bilood ee soo socda.